Swollen glands (အကျိတ်ရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Swollen glands (အကျိတ်ရောင်ခြင်း)
Phyo Wai Yan မှ ရေးသားသည်။ 07/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Swollen glands (အကျိတ်ရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အကျိတ်ရောင်တယ်ဆိုတာဟာ ခန္ဓါကိုယ်က ရောဂါတွေကို တိုက်ထုတ်နေရတယ်ဆိုတာကို ပြသတာပါ။ ၂ပတ်၃လောက်ကြာရင် သူ့ဘာသာသူသက်သာလာပါလိမ့်မယ်။ အကျိတ်တွေဟာ ပဲလုံးအရွယ်ရှိပြီး သွေးဖြူဥတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ အခြားအရာတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကြီးရဲ့ အရေးကြီး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်တစ်လျောက်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
ပိုးဝင်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ရောဂါတွေကြောင့်ဆိုရင် စင်တီမီတာအနည်းငယ်လောက်ထက် ပိုရောင်နိုင်ပါတယ်။ အကျိတ်ရောင်တာကို ဆေးပညာအရ Lymphadenopathy လို့ခေါ်ပြီး မေးအောက်၊ လည်ပင်းတစ်ဝိုက်၊ ချိုင်းနဲ့ ပေါင်ခြံတို့မှာ တွေ့ရများပါတယ်။ ပိုပြီးလည်းကြီးတတ်ပါတယ်။
Swollen glands (အကျိတ်ရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသက်အရွယ်မရွေး တော်တော်လေးအဖြစ်များပြီး မိန်းမတွေထက် ယောက်ျားတွေမှာ အတွေ့ရများပါတယ်။ အန္တရယ်ရှိအချက်များကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်းအားဖြင့် ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Swollen glands (အကျိတ်ရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အတွေ့ရများတဲ့ လက္ခဏာကတော့ ပိုးဝင်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ရောဂါတွေကြောင့် စင်တီမီတာအနည်းငယ်ထက်ပိုပြီး ရောင်တာပါပဲ။
အထက်တွင်မဖော်ပြထားသော လက္ခဏာများလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိချင်တာတွေ ရှိသေးတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
အောက်ပါတို့ကို ခံစားနေရပါက ဆရာဝန်ဖြင့် ပြသသင့်ပါတယ်။
အကျိတ်ရောင်နေပြီး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း မသက်သာသွားခြင်း ဒါမှမဟုတ် ပိုကြီးလာခြင်း
ဖိကြည့်တဲ့အခါမှာ မာသလိုခံစားရပြီး မလှုပ်ရှားခြင်း
လည်ပင်းနာနေပြီး မျိုချရ၊ အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်း
ဘာဖြစ်မှန်းမသိ ကိုယ်အလေးချိန်တွေ သူ့ဘာသာကျနေခြင်း၊ ညဘက်တွင်ချွေးထွက်ခြင်းနှင့် အဖျားကြီးပြီး အဖျားမကျခြင်း
ဘာရောဂါမှမရှိဘဲ နေမကောင်းသလို ခံစားနေရခြင်း
Swollen glands (အကျိတ်ရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အကျိတ်ရောင်တာတွေ များသောအားဖြင့် ဘက်တီးရီးယား ဒါမှမဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်အသေးစား ပိုးဝင်ခြင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ အောက်ပါတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာမှာရှိတဲ့ အကျိတ်ဟာ ရုတ်ချည်းနာကျင်ပြီး ရောင်လာပါလိမ့်မယ်။ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ အဖျားတက်ခြင်းတို့ကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ ဂျိုက်သိုးကြောင့်လည်း အကျိတ်ရောင်တတ်ပါတယ်။ ဂျိုက်သိုးဆိုတာဟာ အရေးပြားမှာ အနီရောင်၊ပန်းရောင်သန်းတဲ့ အစက်ကလေးတွေဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်သက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဝက်သက်ဆိုတာ အရေပြားမှာ နီညိုရောင်အစက်ကလေးတွေဖြစ်စေတဲ့ ကူးစက်လွယ် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတစ်မျိုးပါ။
Cytomegalovirus (CMV) – တံတွေးနဲ့ ဆီးတို့လိုမျိုး ခန္ဓါကိုယ်မှ ထွက်သော အရည်များမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတစ်မျိုး
တီဘီ – ချောင်းဆိုးစေသော ဘက်တီးရီးယား ရောဂါတစ်မျိုး
ကာလသားရောဂါ – ရောဂါရှိသော သူနှင့် လိင်ဆက်ဆံမိခြင်းကြောင့် ကူးစက်တတ်သော ဘက်တီးရီးယားရောဂါတစ်မျိုး
Cat scratch ရောဂါ – ရောဂါရှိသော ကြောင်ကုတ်ခံရခြင်းမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ဘက်တီးရီးယားရောဂါတစ်မျိုး
HIV – ကိုယ်ခံအားကျဆင်းစေသောရောဂါတစ်မျိုး
Lupus – ကိုယ်ခံအားစနစ်က ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အဆစ်၊ အရေပြား၊ သွေးဆဲလ်နဲ့ ကလီစာတွေကို မှားယွင်းတိုက်ခိုက်နေသာ ရောဂါတစ်မျိုး
လေးဘက်နာရောဂါ – ကိုယ်ခံအားစနစ်က အဆစ်အမြစ်တွေရဲ့ တစ်ရှုးတွေကို မှားယွင်းတိုက်ခိုက်နေသော ရောဂါတစ်မျိုး
Sarcoidosis – Granuloma လိုခေါ်တဲ့ နီပြီးရောင်နေသော တစ်ရှုးအကွက်တွေဟာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ကလီစာတွေပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေသော ရောဂါတစ်မျိုး
အောက်ပါတို့ဖြစ်နေပါက ကင်ဆာကြောင့် အကျိတ်ရောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ မပျောက်ကင်းသွားဘဲ ပိုပိုကြီးလာခြင်း
ထိကြည့်ပါက မနာကျင်ခြင်း၊ မာကျောနေခြင်း
ညဘက်ချွေးစီးထွက်ခြင်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းလိုမျိုး အခြားလက္ခဏာတွေနှင့် တွဲနေခြင်း
အကျိတ်ရောင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက ဘာတွေလဲ။
အောက်ပါလူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက အကျိတ်ရောင်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ရေများများသောက်ပေးခြင်း (ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်သည်)
ပါရာစီတမော ဒါမှမဟုတ် အိုင်ဗျူပရိုဖန်တို့လိုမျိုး အနာသက်သာစေသော ဆေးများသောက်ပေးခြင်း ( အသက်၁၆နှစ်အောက်များကို အက်စ်ပရင်မတိုက်ပါနှင့်)
မေးစရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းလမ်းတွေကို ပိုမိုနားလည်သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
https://beta.nhs.uk/symptoms/swollen-glands/. Accessed October 18, 2017.
https://www.nhs.uk/conditions/swollen-glands/pages/introduction.aspx. Accessed October 18, 2017.